R/wasaaraha DF ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon oo kormeeray wasaaradaha qaar. – Radio Daljir
Diseembar 30, 2012 5:21 b 0
Muqdisho, Dec, 30- R/wasaaraha xukuumadda Federaaligaa ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta oo axada kormeeray qaar ka mida xarumaha wasaaradaha dawladda, kuwaasoo ay ugu horeysay wasaaradda warfaafinta,boostada iyo isgaarsiinta.
Mudane Saacid ayaa dhamaan xarumihii uu kormeerka ku tagey waxaa uu kula kulmay masuuliyinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya isagoo ka dhagaystay sida ay shaqada ku socoto iyo dardaaran uu siinayay isagoona ku adkaynayay inay ka shaqeeyaan dawladnimada iyo hormarka dalka.
R/wasaaraha oo meelihii uu booqday ay ka mid ahayd kaydkii raadiyihii qaranka Soomaaliya ayaa la tusay sawiradda madaxweynayaashii dalka soo maray iyo qaar ka mida halgamayaashii dalka, kuwaasoo markii uu fiirinayay si weyn dareenkiisa uu isku badalay.
Kormeerka R/wasaaraha oo ka mid noqonaysa mid ka mida kuwiisii ugu horeeyay waxaa uu warbaahinta mar uu ka hadlay shacabka uu u sharaxay qorshaha xukuumadda ee ku teedsan siyaasadda, amniga iyo wax ka qabashada dhaqaalaha iyo arrimo kaloo dhawra.
Wasiirka 1aad ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shacabka ku booriyay inay ku kalsoonaadaan dawladdooda, wuxuuna balan qaaday inay xukuumaddiisa ka dhabayn doonto balan qaadkii ahaa 100ka maalmood iyo waxqabad muuqda.